आज २०७७ कात्तिक ३ गते सोमबारको राशिफल – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /राशिफल/आज २०७७ कात्तिक ३ गते सोमबारको राशिफल
आज २०७७ कात्तिक ३ गते सोमबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रोलोजर राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
‘पूर्व मा’ओवादी कलाकारको यस्तो वि’जोग, बच्चासँगै सडकमा बास